तपाईंको मार्केटिंग वर्कलोड | विजय गर्न यी सुझावहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् Martech Zone
यदि तपाईं प्रभावी रूपमा आफ्नो मार्केटिंग कार्यभार व्यवस्थापन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो दिनको संगठित गर्ने, तपाईंको नेटवर्कको पुनर्मूल्यांकन गर्ने, स्वस्थ प्रक्रियाहरू विकास गर्ने, र मद्दत गर्ने प्लेटफर्महरूको फाइदा लिने राम्रो काम गर्नुपर्दछ।
टेक्नोलोजी जसले तपाईंलाई फोकस गर्न मद्दत गर्दछ
किनभने म टेक्नोलोजीको मान्छे हो, म त्यसबाट सुरु गर्छु। मलाई थाहा छैन म बिना के गर्नेु ब्राइटपड, मैले कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन प्रयोग गर्ने प्रणाली, कार्यहरूलाई माईलस्टोनमा भेला गर्न, र हाम्रा ग्राहकहरूलाई हाम्रो टोलीले गरिरहेका प्रगतिहरूको बारेमा सचेत राख्न। अन्तिम भाग महत्वपूर्ण छ - मैले प्रायः भेट्टाएको छु कि जब ग्राहकहरू प्रोजेक्टहरूको हालको स्थिति र दृष्टिगत ब्याकलग देख्छन्, उनीहरू थप अनुरोधहरूमा पछाडि फर्कन्छन्। थप रूपमा, यो मलाई अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ जब मेरा ग्राहकहरूसँग उनीहरूसँग काम गर्न को लागी जरुरी समस्याहरू खडा हुन्छन् कि उनीहरूसँग व्यवहार गर्न बजेट बढाउन चाहान्छन्, वा हामी प्राथमिकताहरू बदल्छौं र अन्य छुट्याउने मितिहरूमा पछाडि सर्छौं।
परियोजना व्यवस्थापनको साथ, पात्रो व्यवस्थापन सधैं आलोचनात्मक भएको छ। मसँग बिहान बैठकहरू छैन (यस बारे पछि पढ्नुहोस्) र म मेरो नेटवर्कि meetings बैठकहरू हप्ताको एक दिनमा सीमित गर्दछ। मलाई व्यक्तिहरूसँग भेट्न मन पर्छ, तर हरेक पटक हात मिलाउँदैछु ... यसले सामान्यतया मेरो प्लेटमा अधिक काम गर्दछ। मेरो क्यालेन्डरमा जम्मा गर्नु राजस्व उत्पन्न गर्ने काम पूर्ण हुनको लागि फिर्ता समय जित्नु महत्वपूर्ण छ।
प्रयोग गर्नुहोस् कार्यतालिका अनुप्रयोगहरू कुराकानी गर्न र बैठक को समय निर्धारित गर्न। क्यालेन्डर ईमेलहरूको पछाडि र अगाडि बर्बाद गर्नु हो तपाईंलाई अब आवश्यक पर्दैन। मसँग मेरो साइटको च्याट बोटमा एउटा निर्माण गरिएको छ बहाव.
बिहानको समयमा तपाईंको सबैभन्दा जटिल कार्यहरू पूरा गर्नुहोस्
म हरेक बिहान मेरो ईमेल जाँच गर्थे। दुर्भाग्यवस, प्रवाह दिनभरि कहिल्यै रोकिएन। फोन कलहरू र निर्धारित बैठकहरू थप्नुहोस्, र म प्रायः सोचिरहन्छु कि यदि मैले दिनभरि केही गरें भने। म त मध्य रातको तेल जलाउँदै थिएँ ताकि अर्को दिनको लागि समात्न र तयारी गर्ने कोशिश गर्दै। मैले मेरो दिनलाई उल्टो पारेको छु - दिनको लागि कुञ्जी कामहरू पूरा गरे पछि मात्र ईमेल र भ्वाइसमेलमा काम गर्दै।
असंख्य अध्ययनहरूले संकेत गरे कि व्यक्तिहरूले बिहानको समयमा प्रमुख कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। यो रणनीति प्रयोग गरेर, बजारहरूले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछन् र ध्यान भंगहरू हटाउँन सक्दछन् (म प्राय: बिहान घरबाट मेरो फोन र ईमेल बन्द गरेर काम गर्दछु)। दिउँसो १::1० पछि आफ्ना साना कामहरू सार्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो तनाव स्तर कम गर्नुहुनेछ, थकानको प्रभाव कम गर्नुहुनेछ, र प्रमुख कार्यहरूको संख्या वृद्धि गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई सफल बनाउँछ।
अन्तमा, यो हो विज्ञान! उत्पादक दिन र ठूलो रातको निद्रा पछि, एक व्यक्तिको दिमागमा डोपामाइनको तुलनात्मक रूपमा उच्च स्तर हुन्छ। डोपामाइन यौगिक हो जुन प्रेरणालाई सुधार गर्दछ, ऊर्जा बढाउन सक्छ, र आलोचनात्मक सोच सुधार गर्दछ। जब तपाईं प्रमुख कार्यहरू पूरा गर्नुहुन्छ, तपाईंको मस्तिष्कले अतिरिक्त नोरपाइनफ्रिन पनि उत्पन्न गर्दछ, एक प्राकृतिक पदार्थ जसले फोकस बढाउँदछ, उत्पादकता बढाउँदछ र तनाव कम गर्दछ। यदि तपाईं दिनभरि कुनै परियोजनाको लागि प्रतिबद्ध हुन संघर्ष गरिरहनु भएको छ, र राती अबेर सम्म निद्रामा पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं साघुँरो र अनियन्त्रित जागिरहनु भएको छ। तपाईंको प्रेरणालाई नियमित गर्न तपाईंको डोपाइनलाई नियमित गर्नुहोस्!
प्रलोभनमा नपर्नुहोस् - तपाईंको मेहनतलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् सोशल मिडिया र ईमेल जाँच गरेर तपाईंको बिहानको परियोजना वा परियोजनाहरू पछि। तपाईका दिनहरू कत्ति महान हुनेछन् भनेर तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ!
तपाइँको माइलस्टोनहरू विस्तार गर्नुहोस्
म ठूलो परियोजनाहरु मा कसरी संपर्क दोस्रो अनुमान गर्न प्रयोग गर्थे। म लक्ष्यहरूको साथ सुरू गर्छु, ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न रोडम्याप सिर्जना गर्दछु, र त्यसपछि म प्रत्येक चरणमा काम गर्न पाउँछु। म ग्राहकहरूसँग काम गर्ने क्रममा, म तिनीहरूको ध्यान वा सरोकारहरूमा अलिकता पनि खिच्छिन कि हामी अझै काम गरिरहेका छैनौं। म चरण १ को बारेमा चिन्तित छु, उनीहरूले चरण १ 1 को बारेमा सोधेको छ। म निरन्तर मेरो ग्राहकहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दै छु। यसको मतलब यो होइन कि हामी फुर्तिलो छैनौं, हामी लक्ष्यहरूको सम्बन्धमा निरन्तर हाम्रो रणनीतिको पुन: मूल्यांकन गर्दैछौं र तदनुसार समायोजन गर्दछौं।
तपाईको लक्ष्य के हो? के ती तपाइँको संगठनको लक्ष्य संग पign्क्तिबद्ध गर्छन्? के तपाईंको लक्ष्य तपाईंको ब्राण्ड उन्नत हुनेछ? तपाईंको क्यारियर? तपाईंको आय वा राजस्व? दिमागमा आफ्ना लक्ष्यहरूको साथ सुरू गर्नु र ती माइलस्टोनमा हिट गर्नको लागि कार्यहरूको विवरणले तपाईंको कामको दिनमा स्पष्टता ल्याउँछ। यो गत बर्ष, मैले मुख्य साझेदारीहरू, महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, र उत्कृष्ट भुक्तान गर्ने ग्राहकहरू पनि काटें जब मैले महसुस गरे कि उनीहरूले मेरो लामो अवधिको लक्ष्यहरूबाट मेरो ध्यान भंग गरिरहेछन्। व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गाह्रो छ, तर यो आवश्यक छ यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने।
त्यसो भए तपाईको माइलस्टोनहरू विस्तृत राख्नुहोस्, तपाईलाई त्यहाँ पुग्ने कार्यहरू पहिचान गर्नुहोस्, तपाईलाई रोकिरहेका अवरोधहरू पहिचान गर्नुहोस्, र तपाईको मास्टर प्लानमा ध्यान दिएर अनुशासन पाउनुहोस्! जब तपाईं स्पष्ट हुनुहुन्छ कि किन तपाईं दिनहुँ गरिरहनु भएको छ, तपाईं बढि प्रेरित र कम तनावग्रस्त हुनुहुन्छ।
तपाईले दोहोर्याउनुहुने सबै चीज स्वचालित गर्नुहोस्
म दुई पटक केही गर्न घृणा गर्दछु, म साच्चै गर्छु। यहाँ एक उदाहरण छ ... मेरो प्रत्येक ग्राहकहरु संग काम को जीवनकाल मा, म प्राय: खोजी ईन्जिन अनुकूलन मा आफ्नो आन्तरिक सम्पादकीय स्टाफ संग काम गर्न समय खर्च। प्रत्येक पटक र प्रत्येक पटक प्रस्तुतीकरण शिल्प गर्नुको सट्टा मसँग केहि लेखहरू छन् जुन म मेरो साइटमा अद्यावधिक राख्छु जुन उनीहरूले सन्दर्भ गर्न सक्दछन्। के दिनहरू लाग्न सक्दछ, प्राय: एक घण्टा वा बढी लिन्छ किनभने मैले विस्तृत सामग्री लेखेको थिएँ तिनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नको लागि।
टेम्पलेट्स तपाईका साथी हुन्! मसँग ईमेल जवाफहरूका लागि टेम्प्लेट टेम्पलेटहरू छन्, मसँग प्रस्तुतीकरण टेम्प्लेटहरू छन् त्यसैले म प्रत्येक प्रस्तुतीकरणको लागि ताजा सुरु गर्न आवश्यक छैन, मसँग काम गर्ने प्रत्येक स engage्लग्नताका लागि प्रस्ताव टेम्प्लेटहरू छन्। मसँग ग्राहक साइट सुरूवात र अनुकूलनको लागि माईलस्टोन र प्रोजेक्ट टेम्प्लेटहरू पनि छन्। केवल यसले मलाई एक समयको बचत गर्छ, यसले प्रत्येक क्लाइन्टसँग पनि राम्रो हुँदै जान्छ किनकि म तिनीहरूलाई समयको साथ निरन्तर सुधार गर्दछु।
अवश्य पनि, टेम्पलेट्सले अगाडि माथि थोरै अतिरिक्त समय लिन्छ ... तर त्यसले तपाईंलाई सडकमा भाग्य बचत गर्दछ। यस प्रकार हामी कसरी साइटहरू विकास गर्छौं, त्यसको आशाका साथ उनीहरूको विकास गर्दै जुन तपाईं अर्को हप्ता व्यापक परिवर्तनहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि काम गरेर, डाउनस्ट्रीम परिवर्तनहरूले धेरै कम समय र प्रयास लिन्छ।
हामीले प्रयोग गर्ने अर्को टेम्प्लाइज्ड दृष्टिकोण भनेको हाम्रो ग्राहकहरूको सामाजिक मिडिया अपडेटहरू मिलाउँदैछ। हामी प्राय: अद्यावधिकहरू स a्कलन गर्दछौं, तिनीहरूलाई क्यालेन्डरको साथ पंक्तिबद्ध गर्दछौं, र उनीहरूका अनुयायीहरूलाई पचाउनको लागि अपडेटको पूरा बर्ष निर्धारित गर्दछौं। यसले केवल एक दिन वा सोही लिन्छ - र हाम्रा ग्राहकहरू छक्क पर्दछन् कि हामीले भर्खर सोचेको एक बर्ष मात्र लिएका छन कि उनीहरूले उनीहरूको सूची बाहिर पोष्ट गरिरहेछन्। पुनश्च: हामीलाई हाम्रो प्रायोजक मन पर्छ Agorapulse को लामबद्ध गर्न र सामाजिक अपडेटहरूका लागि विकल्पहरू!
तपाईंको बैठकको आधा मार्नुहोस्
बहु रिपोर्टहरूले सुझाव दिएका छन् कि meetings० प्रतिशत भन्दा बढी बैठकहरू अनावश्यक छन्। अर्को पटक तपाईले बैठकमा टेबुल वरपर हेर्नुहोस्, त्यस बैठकमा कति पैसा खर्च भइरहेको छ त्यसबारे सोच्नुहोस्, र त्यसपछि परिणामलाई अवलोकन गर्नुहोस्। के यो लायक थियो? विरलै
कलाको सर्वश्रेष्ठ कार्यहरू कहिले पनि एक बैठकमा सिर्जना गरिएको थिएन, मानिसहरू। माफ गर्नुहोस्, तर मार्केटिंग प्रोजेक्टमा सहकार्यको परिणामले मात्र सबैभन्दा कम सामान्य डिनोमिनेटर परिणाम दिन्छ। तपाईंले काम सिध्याउन पेशेवरहरू राख्नुभयो, त्यसैले विभाजन गर्नुहोस् र जित्नुहोस्। मसँग एक दर्जन संसाधनहरू समान प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको हुन सक्छ - धेरै एकसाथ - र शायद म ती सबै एउटै कलमा वा समान कोठामा पाउँदछु। हामी दर्शन सिर्जना गर्दछौं, त्यसपछि त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक संसाधनहरू लात हाल्नुहोस्, जबकि ट्राफिकहरू कम गर्न ट्राफिकलाई निर्देशन दिनुहुन्छ।
यदि तपाईं बैठकमा उपस्थित हुन अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने, मेरो सल्लाह यहाँ छ:
यदि बैठकमा आमन्त्रित गर्ने व्यक्तिले तपाईलाई व्याख्या गरे भने मात्र मिटिंग निमन्त्रणा स्वीकार्नुहोस् किन तिनीहरू तपाइँ उपस्थित हुन आवश्यक छ। मैले एउटा ठूलो कम्पनीमा काम गरें जहाँ म हप्ताको meetings० मीटिंगबाट २ सम्म जान्छु जब मैले मानिसहरूलाई भनेको थिएँ उनीहरूले किन नबुझेको म उपस्थित हुन सक्दिन।
केवल एजेन्डाको साथ बैठकहरू स्वीकार गर्नुहोस् जुन विस्तृत छ बैठकको लक्ष्य र प्रत्येक भागको लागी समय बैठक को। यस विधिले बैठकहरूको एक टनलाई मार्दछ - विशेष गरी दोहोरिएका बैठकहरू।
केवल एक बैठक संयोजक, एक बैठक टाइमकीपर, र एक बैठक रेकर्डर संग बैठक स्वीकार। संयोजकले बैठकको प्रत्येक अंशलाई विषयमा राख्नु पर्छ, समय कर्मीले बैठकलाई समयमै राख्छ, र रेकर्डरले नोटहरू र कार्य योजना वितरण गर्दछ।
केवल मिटिंगहरू स्वीकार गर्नुहोस् जसले विस्तृत कार्य योजनाको साथ समाप्त हुन्छ कसले के गरिरहेका छन्, र उनीहरूले यो कहिले प्राप्त गर्नेछन्। र त्यसपछि ती व्यक्तिहरुलाई उत्तरदायी राख्नुहोस् - तपाईको बैठकको लगानीको फिर्ताको कार्यको वस्तुहरुलाई तुरुन्त पूरा गर्न सक्ने तिनीहरूको क्षमतामा आधारित छ। टीममा आधारित कार्य वस्तुहरू वेवास्ता गर्नुहोस् ... यदि एक व्यक्तिले कार्यको स्वामित्व पाएन भने, यो पूरा हुँदैन।
यदि meetings० प्रतिशत बैठकहरू समयको बर्बादी हो भने, तपाईको कामको हप्तामा के हुन्छ जब तपाईं त्यसमा आधा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्नुहुन्छ?
आउटसोर्स के तपाईं मा चल्नुहुन्छ
यो आफैंलाई केहि कसरी गर्ने वा तपाइँसँग परिचित हुनुहुन्न भन्ने समस्याको निवारण गर्न सिकाउँदछ भन्ने समयले केवल तपाइँको उत्पादकत्वलाई नष्ट गरिरहेको छैन, यसले तपाइँ वा तपाइँको कम्पनीको भाग्य खर्च गर्दछ। यदि तपाईं उद्यमी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पैसा कमाउनुहुन्छ जब तपाईं आफूले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ। सबै अरू साथीहरु संग आउटसोर्स हुनु पर्छ। मसँग दर्जनौं सब-कन्ट्र्याक्टरहरू छन् जुन म हेडशट फोटोग्राफीदेखि लिएर उत्तरदायी ईमेलहरू निर्माण गर्न, हाम्रो अर्को इन्फोग्राफिक अनुसन्धानको लागि सबै कुराको लागि कल गर्दछु। मैले सँगै राखेका टीमहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्छन्, राम्रोसँग भुक्तानी गरिन्छ, र मलाई कहिले निराश पार्दैन। तिनीहरूलाई भेला गर्न एक दशक लाग्यो, तर यो यसको लागि लायक छ किनकि मैले मेरो ध्यान केन्द्रित गर्न केमा ल्याउँदछ जुन मेरो व्यापारलाई राम्रोसँग चलाउँदछ।
यस हप्ता, उदाहरणका लागि, एक ग्राहक मसँग आएको थियो जुन उनीहरूले महिनौंदेखि काम गरिरहेछन् भन्ने मुद्दाको साथमा आए। विकास टोलीले प्रणाली निर्माणमा काम गर्न महिनौं खर्च गरेको थियो र तिनीहरूले अब व्यवसाय मालिकलाई यो सुधार्नको लागि केहि बढी महिना लाग्ने कुरा गरिरहेका थिए। किनकी म उनीहरुका एकीकरण र उद्योग मा एक विशेषज्ञ संग परिचित थिए, मलाई थाहा थियो कि हामी कोड कम लाईसेन्स पाउन सक्छौं। केही सय डलरको लागि, तिनीहरूको प्लेटफर्म अब पूर्ण रूपमा एकीकृत छ ... र समर्थन र अपग्रेडको साथ। अब तिनीहरूको विकास टोली कोर प्लेटफर्म मुद्दाहरूमा काम गर्न स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ।
तपाईलाई पुरा हुन के धेरै समय लागिरहेको छ? तिमीलाई कसले सहयोग गर्न सक्छ? तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने एउटा तरिका पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईं खुसी हुनुहुनेछ!
टैग: समीक्षा संकलन गर्नुहोस्कारकहरूप्रेस विज्ञप्ति वितरणमात्रासामाजिक अन्तर्दृष्टि
टgle्गलमा ठूलो सल्लाहको लागि धन्यवाद। मैले यसलाई केहि दिन प्रयोग गरिरहेको छु र यो उत्तम छ! म मेरो बिज, परिवार, स्कूल, चर्च, HOA र अन्य संगठनहरूको लागि सात फरक गुगल क्यालेन्डरबाट काम गर्दछु र म भेट्नका लागि उपलब्ध छु भनेर जान्न चाहने व्यक्तिको लागि धेरै कलहरू, ईमेलहरू र SMS पाउँदछु। जब म यी सबै शब्दहरू प्राप्त गर्दछु मेरो लागि ठूलो समय बचाउने र आशावादी हुनु पर्छ।
BTW - यसका लागि एक निing अनुप्रयोग छ तर यसमा बग रहेको छ कि ट theगल टेक मान्छेहरू अहिले काम गरिरहेका छन्। तिनीहरू दावी गर्छन् कि यो केहि दिनहरूमा निश्चित हुनेछ।
चिच्याउनु भएकोमा धन्यवाद, डग! टgle्गल मेरो लागि एक उत्तम उपकरण भएको छ र मलाई खुशी छ कि तपाइँ पनि यो मनपराउनुहुन्छ। म हाम्रो बैठक अगाडि हेर्छु 🙂
अगस्ट 27, 2009 मा 3: 09 AM
मलाई टgleगल उल्लेख गर्नु भएकोमा धन्यवाद। एक महान् सेवा जस्तो लाग्छ र मैले धेरैले आफ्नो सकारात्मक अनुभवहरू उपकरणसँग साझेदारी गरेको सुनें। यस्तो लाग्छ कि मैले यो प्रयास गर्नुपर्दछ।